It is me. Ko Niknayman.: အကြမ်းမဖက်အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုကော်မီတီ၏ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ထံ အကြံပြုစာ။
အကြမ်းမဖက်အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုကော်မီတီ၏ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ထံ အကြံပြုစာ။
Posted by Ko Niknayman at 3:30 PM
ရတနာသုံးပါးကို ရိုသေမြတ်နိုးလက်စုံမိ်ုး၍ ရှိ်ခိုးပူဇော်ပါ၏။
ဘုန်းဘုန်းချမှ လုံးလုံးရမယ် သံချပ် downlaod
ရိုက်နှက်ခြင်း၊ ပြစ်ခတ်ခြင်း ဖြစ်ပါက ထိခိုက်ခံ ရသည့်သူ များအတွက် အရေး ပေါ်နားခိုရန်နေရာများ၊ ရှောင် တိမ်းရန်နေရာများ၊ ဆေးကုသခံရန်နေရာ များအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဒီလုပ်ငန်းများအား ပြည်သူဝန်ထမ်းများ နှင့် တတ်ကျွမ်းသူများမှ ၀ိုင်းဝန်း စီစဉ်ထားပေး သင့်ပါသည်။ နအဖနှင့် လက်ပါးစေများမှ အကြမ်းဖက် နှိမ် နင်းပါကလူထုအင်အားနှင့်စုပေါင်း အကာအကွယ်ပေးသင့်ပါသည်။ လက်ဆင့်ကမ်းပြီး တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး လူထုတပ်လှန့် ထားရန် အသိပေး ထားရန်သတိပေးထားရန် အမြန်လိုပါသည်။ ပြည်သူတစ်ဦးအနေနဲ့မိမိ နိုင်ရာ တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ပေးစေ လိုပါသည်။
ဘာသာရေးအဓိကရုန်းကို နအဖမှ ဖန်တီးလိမ့်မည်။
ဘာသာရေး အဓိကရုန်း ဖြစ်ရန် နအဖမှ ယုတ်မာစွာ ကြံစည်နေသည် ဟု ပြည်သူဘက်ကို လိုက်လိုသော ကြံ့ ဖွတ် အချို့ မှ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ အားသတင်း ပေးထား ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ ရှိသောဘာသာဝင်များအားလုံး သတိထား ပြီး ရှောင်ရှားနိုင်ရန် မိမိ လက်ကမ်းမှီရာ သို့ သတိပေးကြစေလိုပါသည်။
ပတ္တနိက္ကုဇ္ဖန ကံဆောင်ခြင်း ဆိုသည်မှာ
မိတ်ဆွေတို့ အားလုံးအား အသိပေးအပ်ပါသည်။
မည်သူ့ ဘလော့တွင်မှ နစ်နေမန်း ၀င်ရောက်ရေးသားခြင်း မပြုသည်မှာမြန်မာပြည်တွင်း ဆန္ဒပြပွဲဖြစ်သည့်အချိန်မှ စတင်ပါသည်။
အခြားသူများ၏ဘလော့တွင်နာမည်အတုသုံးကာရိုင်းစိုင်း စွာဝင်ရောက် ရေးသားနေသူများသည် နအဖလက်ပါးစေ မိမဆုံးမ မဆုံးမ လူမဟုတ် သော တိရိစ္ဆာန်များသာ ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
အင်တာနက် အသုံးပြုကျုးလွန်သော ရာဇ၀တ်မှုများ အ တွက်မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့့သည်အိုင်တီဌာနကိုဖွဲ့ စည်း လိုက်သည်ဟုသိရ သည်။
ဆိုက်ဘာကဖေးများ အနေနှင့်စက်များက မည်သည့် အကြောင်းအ ရာများ သုံးစွဲသည်ကို မှတ်တမ်းတင်သည့် စနစ်များ တပ်ဆင်ထားပြီး မသင်္ကာဖွယ် သုံး စွဲသူ များကို သက်ဆိုင်ရာသို့အကြောင်းကြားပေးရန် လိုသည်ဟုရဲ တပ်ဖွဲ့ မှ ပြောကြားကြောင်း။ ပြည်တွင်းမှ သတိနဲ့ သုံးနိုင် ဖို့ လိုပါတယ်။
ပြည်သူများခင်ဗျာ - အထူးမေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်။
နအဖက လက်ပါးစေ လူမိုက်တွေအဖြစ် မွေးထားတဲ့ စွမ်းအားရှင် ဆိုတဲ့သူတွေ နဲ့ပြည်သူအချင်းချင်း အိုးမဲသုတ်ပြီး ပြန်ရန်တိုက်ပေးနေတာ၊အခု ဆိုရင်လက်ရှိဆန္ဒပြတဲ့သူတွေအရိုက်ခံရ၊အဖမ်းခံရနဲ့ အထိနာနေကြ ပါတယ်။
ဒီနေ့ လှည်းတန်းမှာအတော့်ကိုအထိနာနေပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေကို ပြည်သူများမှဝင်ရောက်ပါဝင်မကယ်ဖူးဆိုရင်ဒီလိုရှေ့ကအနာခံပြီးရင်း တဲ့ သူတွေအတွက် တစ်ဖက်သတ် ခံနေရတာတွေ ပိုဆိုးပါလိမ့်မယ်။
ပြည်သူတစ်ဦးချင်းစီတိုင်းလက်တွေ့ ပါဝင်မှ ဖြစ်မယ့် အခြေအနေဖြစ်နေ
ပါပြီ။တက်ကြွစွာစည်းရုံးပါဝင်ကူညီ ကြပါခင်ဗျာ။ အမိမြန်မာပြည်ကောင်း စားရေး အတွက်ပါ။ ကျေး ဇူး အထူး တင်ရှိပါသည်။
ပြည်သူ့ တော်လှန်ရေးဆိုတာ ဘယ်တော့မှ ကျဆုံးတယ်ဆိုတာမ...
လေးစားဂုဏ်ပြုပါသည်. သံဃာ့ အာဇာနည်။
သန်းရွှေက သူ့ မျက်နှာနဲ့ဘုရားဆင်းတုတော် ထုလုပ်...
ဘာသာသာသနာနဲ့သံဃာတော်တွေကို ထပ်မံစော်ကားပြန်ပြီ။
ဦးရွှေနှင့် ဦးကျင်ပိန်းတို့ အကြောင်း။
မစ္စတာပင်ညဲရိုးရဲ့အစီရင်ခံစာ (မြန်မာဘာသာပြန်)။
ပြည်သူ့ သစ္စာဖောက် တစ်ယောက်အကြောင်းနဲ့ဒုရဲအုပ်တစ...
ရန်ကုန်မြို့ ရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေပြ ဓါတ်ပုံများ။
ပြည်သူ့ သစ္စာဖောက် တစ်ယောက်။
ဂုဏ်ပြုထိုက်သူကို ဂုဏ်ပြုခြင်းသည် မင်္ဂလာမည်၏။
ပြည်သူတွေကို ညဉ်းပမ်းနှိပ်စက် သတ်ဖြတ်နေတာတွေကို ရပ...
စိတ်သောကဖိစီးနေပြီ ဖြစ်သော ဗိုလ်ချူပ်မိုက်ကြီး သန်...
စက်တင်ဘာလအတွင်းက ရဟန်းသံဃာတော်တွေရဲ့ချီတက်လမ်းေ...
နအဖရဲ့ အထူးထိပ်တန်းလျှို့ ဝှက်မဟာဗျူဟာတဲ့။ အင်မတ...
ပြည်သူ့ သမဂ္ဂ (မြန်မာနိုင်ငံ) ၏ နှိုးဆော်ချက်။
မြန်မာပြည်အရေး ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲ (Burma How Long) ဆ...
နိုင်ငံတကာလူ့ အခွင့်အရေးနေ့ ။
၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ၏ နိုင်ငံတကာလူ့ အခွင့်အရေး...
တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် စွန့် စွန့် စားစားဆောင...
လူသတ်အစိုးရကျဆုံးပါစေ ဟု ဆေးနီဖြင့် ရေးသားထား။
ရွှေဝါရောင်အင်အားများစုစည်းရေးကော်မီတီမှ ကြေညာချ...
ပြည်သူ့ အတွက်အလေးပေး ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ။
မစိုးရိမ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးကောဝိဒါဘိဝံသ၏ ဆုံးမသြ...
ကျပ် ၂၀ တန်ငွေစက္ကူများတွင် အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးစာများ...
လူထုဒေါ်အမာ မွေးနေ့မှာ ကဗျာရွတ်ပွဲ ဆင်နွှဲခဲ့ကြသော က...
ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများသမဂ္ဂ (ဗ.က.သ) ၏ ...
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတဦး နအဖ စစ်ဗိုလ်တဦး၏ စော်ကားခြင...
အမျိုးသားနေ့အထိမ်းအမှတ် နှိုးဆော်ချက်။
မြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ကားမောင်းခရီး စတင်ပြါ...
သတင်းစုံလင်..သိချင်ရင် BBC News Burma Today Democratic Voice of Burma Irrawaddy Magazine khitpyaing Journal Mizzima News Moemaka. Radio Myanmar Bloggers Myanmar Tea Shop Radio Free Asia U Than Shwe Blog You Can Wish for Daw Aung San Suu Kyi